Indlela yokulwa ne-cellulite - Indlela yokuqeda i-cellulite emadodeni | Amadoda anesitayela
Indlela yokulwa ne-cellulite
U-Alicia tomero | 31/10/2021 20:21 | Ukunakekelwa komuntu siqu, Kufanelekile, Ukufaneleka, Ezempilo
I-cellulite ejabulisayo iwukwakheka okucasulayo kwamafutha lokho kuthinta kokubili amadoda nabesifazane. Ikakhulukazi yisimo esihlotshaniswa kakhulu nabesifazane kusukela ngaleso sikhathi maningi amathuba okuthi bahlupheke yikho, kodwa maningi amadoda ahlupheka ngokulinganayo. Njengoba kunikezwe leli qiniso, bayazibuza ukuthi kuyini nokuthi bangalwa kanjani ne-cellulite.
Le cellulite ukunqwabelana kwamaqhuqhuva anamafutha ezivame ukugxila noma ezinqwabelene ezindaweni ezifana nalezi imilenze, izinqe noma isisu. Kuyinto ongayithandi njengoba lezi zindawo ziba sengozini enkulu yokuba nesisindo futhi awuthandi. Eduze U-10% wabesilisa uhlushwa yiwo Futhi ukuthi abesifazane bahlushwa yikho kuhlobene kakhulu nenani eliphezulu lama-estrogens emzimbeni wabo.
1 Yini i-cellulite?
2 Kungani amadoda ehlushwa i-cellulite
2.2 Izinkinga zamahomoni kanye nezakhi zofuzo
2.3 Indlela yokulwa nokuqeda i-cellulite?
Ziyizigaxa zamafutha ezakha ngaphansi kwesikhumba ezenza ama-ridge noma ama-dimples okungukuthi lokho okubizwa ngokuthi "ikhasi lewolintshi". Amaqhuqhuva anamafutha akhayo ayavuvukala futhi akhiqize ivolumu encane engabukeki engathinta ukuzethemba. Babalelwa ku-85% abesifazane abaphethwe yiso.
Kungani amadoda ehlushwa i-cellulite
Amadoda athola i-cellulite ngokwehlukile kwabesifazane. Akwaziwa ukuthi kungani lokhu kungenxa, kodwa ezinye izici ezingase zivuse umcimbi onjalo, kuhlanganise naso imikhuba yokuphila, ukudla, izakhi zofuzo noma ubukhona be-hormonal.
Kuwukhiye wokuthi le nto ivele. Ukudla okunothe ngamafutha agcwele noma ngevolumu ephezulu yoshukela ocolile kuzobangela ukusabalala kwawo kukhuphuke kakhulu. Eminye imikhuba ongayithinta wukuphuzwa kotshwala, uma kubhekwa ukuthi bukhona inani eliphezulu lama-calories nokubhema ugwayi.
Indlela yokuphila engenzi lutho nokucindezeleka
Kuyindlela eyinhloko yokuthi i-cellulite yakheke futhi ihlale isikhathi eside emzimbeni. Uma umzimba ungasetshenzisiwe akukho zindleko zama-calories, futhi ama-calories awadliwe aguqulwa abe ngamafutha. Ngaphezu kwalokho, indlela yokuphila engenzi lutho idala izinkinga eziningi emzimbeni kanye nama-pathologies angenakubalwa.
Esinye isici esithonya kakhulu ukucindezela, njengoba umzimba ungalawuleki futhi ngokulinganayo ukujikeleza kwegazi lakho kuphazamisekile, ngakho ukugcinwa kwamanzi kukhona futhi ngenxa yalokho ukubukeka kwamafutha.
Izinkinga zamahomoni kanye nezakhi zofuzo
Nakuba kungabesifazane ikakhulukazi abanale nkinga, nabesilisa bangaba nayo ukungalingani okuhlobene nama-estrogens. Ngokuqondene nezakhi zofuzo, isici sofuzo singenye yezimbangela ezinkulu, okufanayo kwenzeka nge-alopecia. Uhlobo lwe-cellulite noma lapho luvela khona luzoba enye yezimbangela.
Indlela yokulwa nokuqeda i-cellulite?
Kunezinhlobo ezintathu ze-cellulite ezingavela futhi ngenxa yalokho abafana abathathu ukulwa. Kuyiqiniso ukuthi isikhumba samadoda sikhulu kakhulu kunesabesifazane, ngakho-ke ukubonakala kwaso kufihliwe kakhulu.
Okuhle kakhulu phila impilo esebenzayo, lapho engikwazi khona dlala ezemidlalo futhi uqinise imisipha yakho. Ukudla okunamafutha amancane, ushukela notshwala nakho kusiza ekulweni ngisho nokuqala ukuqeda i-cellulite esivele ikhona. Uma ungenawo amandla, inhloso engcono kakhulu ukuzibeka ezandleni zikachwepheshe kanye nesazi sokudla okunempilo. Kuzokusiza ukuthi ukhethe ukudla okungcono kakhulu futhi kuzokuthathela ukulandelela komuntu siqu ngenqubo yokuzivocavoca kanye nokudla komuntu siqu kuye ngendlela yakho yokuphila.
Kukhona izindlela zokwelapha ezingasheshisa inqubo futhi ezingadingi ukuhlinzwa. Enye yazo futhi esetshenziswa abesifazane ifrikhwensi yomsakazo, lapho ukushisa kusetshenziselwa ukuvuselela i-collagen. Lokhu kushisa kuzosiza ukuhlakaza i-cellulite ngemva kweseshini eziningana futhi kuzosiza ukuqinisa isikhumba. Ukuze uqaphele ukuthuthuka, okungenani amaseshini ayi-10 ayadingeka.
I-Mesotherapy isetshenziswa njengenye indlela futhi inikeza imiphumela emihle kakhulu. Imayelana imijovo emincane yezinto ezihlukahlukene, phakathi kwabo imithi, okuzosiza ukuhlakaza ama-nodules amafutha.
Amadoda ube nokuthambekela okuphezulu kokulahlekelwa isisindo esesimweni esingcono nangesimo esingcono kunabesifazane. Ukuzivocavoca izikhathi ezintathu kuya kwezine ngesonto kuzodingeka ukuze uqaphele izinguquko. Ingaqala ukuqinisa imilenze ukuhamba ngezinyawo ukuze kusebenze ukugeleza kwegazi. Uma okudingayo ukususa amafutha esiswini, kuyanconywa hamba uyobhukuda. Kungumdlalo ophelele kakhulu ozokusiza ukuthi uphimisele izindawo ezahlukahlukene zomzimba, ne-cardio ingumsebenzi oyinhloko wokwenza kusebenze konke ukujikeleza emzimbeni.
Cellulite emadodeni kuyinto engabukeki, kodwa akuyona inkinga lapho ubukhona bayo bungeqisi. Kuphela futhi njengesimiso kuyohlale kuyinkinga yokuhamba kwegazi, okuthi uma ingelashwa ingaba nemiphumela kwezinye izinkinga ezihlobene.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Indlela yokulwa ne-cellulite
Lokhu kube ukufika eSpain kwemakethe yase-Italy iVentis
Ungazi kanjani ukuthi ngine-frenulum emfushane